Cuntooyinka Aan Haboonayn In Lagu Casheeyo!! - Daryeel Magazine
Cuntooyinka Aan Haboonayn In Lagu Casheeyo!!
Haddii aad habeenkii hurdo la’aan ama hurdo xumo ka cabanayso, waxaa laga yaabaain sababtu ay tahayba nooca cunto ee aad ku cashayso, waayo khubarada caafimaadku waxa ay sheegeen in cuntooyinka ay uu geed kulaylku ku badan yahay, sida xawaashyada iyo busbaaska, cuntooyinka uu Barootiinku ku badan yahay iyo cuntada maadadda Kaafiyeenta leh (Caffeine) ay dhammaantood sababaan in qofku habeenkii hore u seexan waayo ama hurdo xasiloon seexan waayo.
Cilmibaadhis tijaabadeeda lagu sameeyey 2 kun oo qof oo la eegay nidaamkooda cunto iyo nooca hurdo ee ay seexdaan, oo ay ogaadeen in xidhiidh adagi ka dhexeeyo, sidoo kale waxa ay xeeldheerayaashu daraasaddan ku ogaadeen in fikirka maskaxda mashquuliyaa uu kaalin weyn ku leeyahay hurdo xumada ama hurdo-waaga mararka qaarkood yimaadda. Sammy Margo oo ah oo ku xeeldheer culuunta hurdada, ahna qoraaga buugga ‘Tilmaahaha hurdada fiican’ oo afka Ingiriisiga ku qoran, ayaa seegay in cilmibaadhistani ay si cad u sheegtay in dadka badankoodu ay mo’ogan yihiin in cuntadu aycaawisoxoojinta hurdada iyo in ay noqoto hurdo raaxo leh. Sammy waxa uu intaas ku sii daray, “In qofku uu jiifsado isaga oo markaas uun afka ka qaaday cunista cunto xawaashyaduku badan yihiin waxa ay ku keenaysaa calool olol, iyo hurdo aan xasiloonayn in uu seexdo. Sidoo kale cuntooyinka uu ku badan yahay dufanka Barootiintiisu ay sarrayso sida hilibka, ayaa keena cillad ah in dheefshiidka shaqadiisu gaabis noqoto, waxa aanay khalkhal ku keentaa saacadda Bayoolojiga ah ee qofka maskaxdiisu ku nidaamsato hawlaha u yaalla qabashadooda.
Cuntooyinka hurdada Ka Hor Lagu Talinayo:
4. Boorashka: Boorashku waxa uu jidhka ka caawiyaa in uu soo saaro maadadda muiimka ahee Insulin, taas oo caawisa in sonkorta jidhku si dabiici ah kor ugu kacdo. Sidoo kale boorashku waxa uu qani ku yahay hormoon jidhka ka cawiya nidaaminta hawlihiisa iyo in uu hawl kasta waqtigeeda u go’an dareen maskaxeed u yeesho.
Cuntooyin Aan Ku Haboonayn In Tallaagadda La Gashto Iyo Sababta Khubaradu U Diideen Dariiqooyinka Lagu Ilaashado Caafimaadka Kilyaha Cuntooyinka Yareeya Isku Buuqa (Stress) Cuntooyinka Sababa Cudurka Kansarka Ee ay Tahay Inaad Ka Fogaato